बजार – फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो ? – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ५ माघ आईतवार १४:१४
बजार – फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो ?
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । शनिबारको तुलनामा आइतवार सुनको मूल्य प्रतितोला २ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, आइतवार छापावाल सुन प्रतितोला ७५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शनिबार छापावाल सुन प्रतितोला ७४ हजार ८ सय रुपैयाँमा करोबार भएको थियो ।
आइतवार तेजावी सुन प्रतितोला ७४ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । महासंघका अनुसार, आइतवार चाँदी प्रतितोला ८ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।अघिल्लो दिनपनि चाँदी सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।
आजको सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च, ताेलामा ७८ हजारले नाघ्यो
धितोपत्र बजार – ३० अङ्कको वृद्धि
आज सुन ७७ हजार नाघ्यो
कोरोना भाइरसको प्रभाव – सुन हालसम्मकै महँगो
PREVIOUS Previous post: चिङ्गाड गाउँपालिकामा संचारसेवा अवरुद्ध, स्थानीय बासिहरुलाई सास्ती
NEXT Next post: गायिका आस्था राउतविरुद्ध मुद्दा दर्ता